Chikonzero Nei Zvakaoma Kuita Zvakanaka—Zvinoda Kuzivikanwa Nevana
SAURO paaiita zvakaipa, ndiani aifara?— Satani Dhiyabhorosi aifara. Asi vatungamiriri vechitendero chevaJudha vaifarawo. Zvino apo Sauro uyo akazonzi Pauro akava mudzidzi woMudzidzisi Mukuru, vatungamiriri vechitendero ivavo vakatanga kumuvenga. Saka unogona kuona here kuti nei zvakaomera mudzidzi waJesu kuita zvakanaka?—
Nei Sauro achifunga kuti zvakanaka kuuraya Stefani?
Mupristi mukuru uyo ainzi Ananiyasi akamboudza vanhu kuti varove Pauro kumeso. Ananiyasi akatoedza kuti Pauro aiswe mujeri. Pauro akatambura zvikuru paakava mudzidzi waJesu. Somuenzaniso, vanhu vakaipa vakarova Pauro vakaedza kumuuraya nematombo makuru.—Mabasa 23:1, 2; 2 VaKorinde 11:24, 25.
Vazhinji vachaedza kutiita kuti tiite zvinhu zvisingafadzi Mwari. Saka mubvunzo ndewokuti: Unoda zvakanaka zvakadini? Unozvida kwazvo zvokuti uchaita zvakarurama kunyange vamwe vanhu vachikuvengera izvozvo here? Zvinoda ushingi kuita kudaro, handitika?—
Ungashamisika kuti, ‘Nei vanhu vangativenga patinoita zvakanaka? Havafaniri kufara here?’ Ungafunga kudaro. Kazhinji vanhu vaida Jesu nokuda kwezvakanaka zvaaiita. Pane imwe nguva, vanhu veguta vose vakaungana pasuo reimba yaaigara. Vakauya nokuti Jesu aive achiporesa vanhu vairwara.—Mako 1:33.
Asi dzimwe nguva vanhu vaisada zvaidzidziswa naJesu. Kunyange zvazvo aigara achidzidzisa zvakanga zvakarurama, vamwe vakaratidza kumuvenga kukuru nokuti aitaura chokwadi. Izvi zvakaitika rimwe zuva muNazareta, guta rakakurira Jesu. Akapinda musinagogi, nzvimbo yaiunganira vanhu vechiJudha kuti vanamate Mwari.
Ipapo Jesu akapa hurukuro yeMagwaro yakanaka zvikuru. Pakutanga vanhu vakaifarira. Vakashamiswa nemashoko akanaka aibuda mumuromo make. Zvakavaomera kudavira kuti uyu ndiye murume wechiduku akanga akurira muguta ravo chairo.
Asi zvino Jesu akataura chimwe chinhu. Akataura nezvenguva apo Mwari akaratidza mutsa chaiwo kuvanhu vakanga vasiri vaJudha. Jesu paakataura izvi, vakanga vari musinagogi vakatsamwa nazvo. Unoziva here kuti nei?— Vaifunga kuti ndivo voga vaiva nenyasha dzaMwari. Vaifunga kuti vaiva nane pane vamwe vanhu. Saka vakavenga Jesu nokuda kwezvaakataura. Uye unoziva here zvavakaedza kumuita?—
Bhaibheri rinoti: ‘Vakabata Jesu ndokumubudisa kunze kweguta nokukurumidza. Vakaenda naye mujinga megomo uye vaida kumukandira kumawere kuti vamuuraye! Asi Jesu akavatiza.’—Ruka 4:16-30.
Ndiani ari kutaura naSauro, uye anotuma Sauro kunoitei?
Kudai izvozvo zvakaitika kwauri, waizombodzokerazve kunotaura nevanhu ivavo nezvaMwari here?— Izvozvo zvaizoda ushingi, handitika?— Zvisinei, pashure pegore, Jesu akadzokera zvakare kuNazareta. Bhaibheri rinoti: “Akatanga kuvadzidzisa musinagogi ravo.” Jesu haana kumbomira kutaura chokwadi nechikonzero chokutya vanhu vakanga vasingadi Mwari.—Mateu 13:54.
Pane rimwe zuva, pasabata, Jesu akanga ari pane imwe nzvimbo paiva nomurume akanga akaremara ruoko. Jesu aiva nesimba rakabva kuna Mwari rokuporesa murume iyeye. Asi vamwe varume ipapo vakanga vachiedza kumutsira Jesu zvinetso. Mudzidzisi Mukuru aizoitei?— Kutanga akabvunza kuti: ‘Kudai waiva negwai rawira mugomba guru uri musi weSabata, waizoribudisa here?’
Chokwadi vaizodaro kugwai, kunyange nomusi weSabata, zuva ravaifanira kuzorora. Saka Jesu akati: ‘Zvinotova nani kubatsira munhu nomusi weSabata, nokuti munhu anokosha kupfuura gwai.’ Zvakanga zviri pachena sei kuti Jesu aifanira kubatsira murume uyu nokumuporesa!
Jesu akati murume wacho atambanudze ruoko rwake. Pakarepo rwakabva rwaporeswa. Murume iyeye akafara sei! Asi zvakadini nevamwe varume vaya? Vakafara here?— Aiwa. Vakatowedzera kuvenga Jesu. Vakabuda vakanoronga kumuuraya!—Mateu 12:9-14.
Zvakangodarowo nanhasi. Pasinei zvapo nezvatinoita, hatingambofadzi munhu wose. Saka tinofanira kusarudza kuti ndiani watinonyatsoda kufadza. Kana ari Jehovha Mwari noMwanakomana wake, Jesu Kristu, zvinoreva kuti tinofanira kuita zvavanodzidzisa nguva dzose. Asi kana tikadaro ndiani achativenga? Ndiani achatiomesera kana tichida kuita zvakanaka?—
Satani Dhiyabhorosi achadaro. Asi ndivanaani vamwe vachadaro?— Avo vakanyengerwa naDhiyabhorosi kuti vadavire zvinhu zvisiri izvo. Jesu akataurira vatungamiriri vechitendero vomuzuva rake kuti: “Munobva kuna baba venyu Dhiyabhorosi, uye munoda kuita kuda kwababa venyu.”—Johani 8:44.
Kune vanhu vazhinji avo Dhiyabhorosi anofarira. Jesu anovadana kuti “nyika.” Unofunga kuti “nyika” iyo Jesu anotaura nezvayo chii?— Ngatione pana Johani chitsauko 15, ndima 19. Ipapo tinoverenga mashoko aJesu aya: ‘Kudai maiva venyika, nyika yaizoda zvikuru zviri zvayo. Zvino nokuti hamusi venyika, asi ndakakusarudzai munyika, nokuda kweizvi nyika inokuvengai.’
Naizvozvo nyika inovenga vadzidzi vaJesu inoumbwa nevanhu vose vasiri vateveri vake. Nei nyika ichivenga vadzidzi vaJesu?— Pafunge. Mutongi wenyika ndiani?— Bhaibheri rinoti: “Nyika yose iri musimba rewakaipa.” Akaipa iyeye ndiSatani Dhiyabhorosi.—1 Johani 5:19.
Wava kuona here zvino nei zvakaoma kwazvo kuita zvakanaka?— Satani nenyika yake vanoita kuti zviome. Asi pane chimwezve chikonzero. Unoyeuka kuti chii here?— MuChitsauko 23 chebhuku rino, takadzidza kuti tose tinoberekwa tine chivi. Hazvizovi zvinofadza here, apo chivi uyeDhiyabhorosi nenyika yake zvichange zvisisipo?—
Bhaibheri rinopikira kuti: “Nyika iri kupfuura.” Izvi zvinoreva kuti vose vasiri vateveri voMudzidzisi Mukuru vachave vasisipo. Havazobvumirwi kurarama nokusingaperi. Unoziva here kuti ndiani achararama nokusingaperi?— Bhaibheri rinoenderera mberi richiti: “Uyo anoita kuda kwaMwari anoramba aripo nokusingaperi.” (1 Johani 2:17) Chokwadi, avo vanoita zvakanaka bedzi, vanoita “kuda kwaMwari,” vachararama nokusingaperi munyika itsva yaMwari. Saka kunyange kana zvakaoma, tinofanira kuita zvakanaka, handiti?—
Nei Jesu akakanganwira mukadzi uyu aimboita zvinhu zvakaipa?
Ngativerenge pamwe chete magwaro aya anoratidza kuti nei zvisiri nyore kuita zvakanaka: Mateu 7:13, 14; Ruka 13:23, 24; naMabasa 14:21, 22.
Mwari Anoda Kutibatsira
Shandisai zvinhu izvi kuti mubatsire vana venyu kuvimba nerubatsiro rwaJehovha.
Imba Rwiyo Rwunotaura Nezveushingi